ငါဘယျလောကျအထိ စှမျးဆောငျနိုငျသေးတယျဆိုတာ မငျးသိသငျ့တယျ…ကိုးလျမနျး (၂) – the One Sports Journal
ငါဘယျလောကျအထိ စှမျးဆောငျနိုငျသေးတယျဆိုတာ မငျးသိသငျ့တယျ…ကိုးလျမနျး (၂)
ဆှာရကျဇျ အီတလီ B1 စာမေးပှဲ
ကြှနျတျော ဘာစီလိုနာကနေ ထှကျတော့မယျလို့ ကွငွောလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ဥရောပအသငျးတျောတျောမြားမြားက ကမျးလှမျးခဲ့လာကွပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ရှေးခယျြမှုကတော့ အီတလီက ဂြူဗငျတပျဈ အသငျးကို ပိုပွီး စိတျဝငျစားမိခဲ့တယျ။
ဂြူဗငျတပျအသငျးနဲ့လညျး သဘောတူညီမှုတဈခြို့လုပျဆောငျနိုငျခဲ့ပွီ ဘာစီလိုနာကလညျး အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ထှကျဖို့ကလညျးအဆငျပွပွေီဆိုတော့ နောကျရာသီမှာ ကြှနျတျောက ဂြူဗငျတပျဈ အသငျးသားဖွဈပွီပေါ့။ စီရျောနယျဒိုနဲ့လညျး တဈသငျးတညျးမှာ အတူကစားဖို့ ဖွဈလာပွီ။
ဒါပမေယျ့ ကိစ်စတဈခုတော့ရှိနတေယျ ဂြူဗငျတပျ အနနေဲ့ အီးယူမဟုတျတဲ့ကစားသမား (၂)ဦးသာ ချေါယူခှငျ့ရှိတယျ။
သူတို့က အာသာနဲ့ မကျကနျနီတို့ကို ချေါယူထားပွီးဖွဈလို့ နောကျထပျ အီးယူနိုငျငံသားမဟုတျတဲ့ကစားသမားထပျမံချေါယူခှငျ့မရှိတော့ပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျော B1 ဒီပလိုမာအောငျလကျမှတျ ရဖို့လိုနတေယျ။
B1 ဒီပလိုမာရဖို့ အီတလီတှရေဲ့ နစေဉျသုံးဘာသာစကား အရေးအဖတျအပွောနဲ့ နားလညျနိုငျစှမျးတှကေို စဈဆေးတဲ့ မေးမွနျးမှုတှကေို ဖွရေမှာ ဒီမေးမွနျးမှုတှကေို ဖွဆေိုဖို့ ကြှနျတျော ပီရူးဂြီယာမှာ စာမေးပှဲသှားဖွရေမယ်။
ရလဒျနဲ့ အခွအေနကေတော့ ခငျဗြာတို့သိပါတယျ။
အရမျးအဆငျမပွခေဲ့သလို ဂြူဗငျတပျဆီ ပွောငျးရှဖေို့ကိစ်စကလညျး ပကျြသှားခဲ့တယျ။
ဘောလုံးရာသီကလညျး ပွနျစတော့မှာဆိုတော့ ကစားခှငျ့ရမယျ့ အသငျးတဈခုခုကို ကြှနျတျောရောကျနဖေို့လိုတယျ။
မကျဒရဈဆိုတာ ဘာစီလိုနာရဲ့ ပွိုငျဘကျ မွို့၊ နညျးပွက ဒေါသအိုး ဆီမွှနျနီ။
စဉျးစား…ဘာလုပျရမလဲ…? နှရောသီ ပွောငျးရှေ့ ခြိနျကလညျး ပိတျဖို့နီနပွေီ။
ဒီအသငျးကလညျး လာလီဂါ ခနျြပီယံဆု ကို ဘာစီလိုနာ နဲ့ ရီးရဲ မကျဒရဈ တို့လိုမြိုးပဲ စိနျချေါနိုငျတဲ့ လူအငျအားရှိနတေဲ့အသငျးတဈသငျးပါပဲ။
အကျတလကျတီကိုကနပွေောငျးလာတဲ့ ဂိုဒငျ နဲ့ ဂရဈဇျမနျတို့ကို အဲ့သညျ့အသငျးနဲ့ ပတျသကျတဲ့အကွောငျး တှေ မေးကွညျ့ရမယျ။
ဂိုဒငျ နဲ့ ဂရဈဇျမနျတို့ပွောတဲ့ အကျတလကျတီကိုနဲ့ ပတျသကျတဲ့အကွောငျးတှကေ အားလုံး အကောငျးတှခေညျြးပဲ သူတို့နှဈယောကျ စလုံးကလဲ အဲ့သညျ့ကလပျမှာ အောငျမွငျမှုတှေ အမြားကွီး ရယူနိုငျခဲ့ကွတာကို ကြှနျတျော သိခငျြတဲ့ အကွောငျးတှေ ၊ ကြှနျတေျာ့ အတှကျ လိုအပျမယျ ထငျတာတှေ အားလုံးကို သူတို့က ပွောပွပေးခဲ့ကွပါတယျ။
ကြှနျတေျာ့ အတှအေ့ကွုံအရ ဆုံးဖွတျခကျြ မခခြငျမှာ လူတဈယောကျနဲ့ နောကျဆုံး စကားပွောကွညျ့ရမယျ။
ကြှနျတေျာ့အပျေါမှာ သူ့ရဲ့ထငျမွငျခကျြ ဘယျလိုရှိမလဲ…?၊
ကြှနျတျော တှမေ့ယျ့ သူက နညျးပွ ဆီမွှနျနီ၊ လာလီဂါရဲ့ ဒေါသအိုး။
နညျးပွ ဆီမွှနျနီ နဲ့တှဆေုံ့းခွငျးကလညျး အရေးပါခဲ့တယျ။
ကြှနျတျော ဆီမွှနျနီနဲ့ စကားပွောဖွဈခဲ့ပွီးခြိနျမှာ ဆုံးဖွတျခကျြခလြို့ရခဲ့ပွီ အကျတလကျတီကိုကိုပွောငျးတော့မယျ။
သူနဲ့ တှပွေီ့းခြိနျမှာ အပွငျမှာထှကျနတေဲ့ သတငျးတှလေိုတော့ အရမျးဆိုးတဲ့သူတဈယောကျတော့မဟုတျဘူး။
အိုကျဒီယာကောငျးတှေ အပွညျ့နဲ့ လူတဈယောကျဘဲ စိတျဓါတျ ခှနျအားတှကေိုလဲ ပွနျရလာတယျ။
ကြှနျတျော ဒီကလပျ နဲ့ နောကျထပျ ဖလားတှေ အမြားကွီး ဆှတျခူးသှားနိုငျအောငျ ကွိုးစားသှားမယျ အသငျးရဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိဖို့ အတှကျလဲ ကူညီပေးနိုငျလိမျ့မယျ ထငျတယျ။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောက ဆှာရကျဇျ။ အထငျသေးတဲ့သူတှကေို သငျခနျးစာပေးရအုံးမယျ။
အဂေကျြ ၊ လီဗာပူး ၊ ဘာစီလိုနာ တို့လို လုံးဝ မတူတဲ့ ကစားဟနျတှေ အောကျမှာ ၊ တဈသားတညျး ဖွဈအောငျ ကစားပွနိုငျခဲ့တဲ့ သူတဈယောကျက တီကို ရဲ့ ကစားဟနျ နဲ့ ပတျသကျပွီးတော့လဲ စိုးရိမျနစေရာ မလိုပါဘူး။
ကြှနျတေျာ့အတှကျ နောကျထပျခရီးမှတျတိုငျတဈခု စတငျတော့မယျ။
ငါဘယ်လောက်အထိ စွမ်းဆောင်နိုင်သေးတယ်ဆိုတာ မင်းသိသင့်တယ်…ကိုးလ်မန်း (၂)
ဆွာရက်ဇ် အီတလီ B1 စာမေးပွဲ
ကျွန်တော် ဘာစီလိုနာကနေ ထွက်တော့မယ်လို့ ကြေငြာလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဥရောပအသင်းတော်တော်များများက ကမ်းလှမ်းခဲ့လာကြပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုကတော့ အီတလီက ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားမိခဲ့တယ်။
ဂျူဗင်တပ်အသင်းနဲ့လည်း သဘောတူညီမှုတစ်ချို့လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီ ဘာစီလိုနာကလည်း အလွတ်ပြောင်းရွေ့ကြေးနဲ့ ထွက်ဖို့ကလည်းအဆင်ပြေပြီဆိုတော့ နောက်ရာသီမှာ ကျွန်တော်က ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းသားဖြစ်ပြီပေါ့။ စီရော်နယ်ဒိုနဲ့လည်း တစ်သင်းတည်းမှာ အတူကစားဖို့ ဖြစ်လာပြီ။
ဒါပေမယ့် ကိစ္စတစ်ခုတော့ရှိနေတယ် ဂျူဗင်တပ် အနေနဲ့ အီးယူမဟုတ်တဲ့ကစားသမား (၂)ဦးသာ ခေါ်ယူခွင့်ရှိတယ်။
သူတို့က အာသာနဲ့ မက်ကန်နီတို့ကို ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်လို့ နောက်ထပ် အီးယူနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ကစားသမားထပ်မံခေါ်ယူခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် B1 ဒီပလိုမာအောင်လက်မှတ် ရဖို့လိုနေတယ်။
B1 ဒီပလိုမာရဖို့ အီတလီတွေရဲ့ နေစဉ်သုံးဘာသာစကား အရေးအဖတ်အပြောနဲ့ နားလည်နိုင်စွမ်းတွေကို စစ်ဆေးတဲ့ မေးမြန်းမှုတွေကို ဖြေရမှာ ဒီမေးမြန်းမှုတွေကို ဖြေဆိုဖို့ ကျွန်တော် ပီရူးဂျီယာမှာ စာမေးပွဲသွားဖြေရမယ်။
ရလဒ်နဲ့ အခြေအနေကတော့ ခင်ဗျာတို့သိပါတယ်။
အရမ်းအဆင်မပြေခဲ့သလို ဂျူဗင်တပ်ဆီ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိစ္စကလည်း ပျက်သွားခဲ့တယ်။
ဘောလုံးရာသီကလည်း ပြန်စတော့မှာဆိုတော့ ကစားခွင့်ရမယ့် အသင်းတစ်ခုခုကို ကျွန်တော်ရောက်နေဖို့လိုတယ်။
မက်ဒရစ်ဆိုတာ ဘာစီလိုနာရဲ့ ပြိုင်ဘက် မြို့၊ နည်းပြက ဒေါသအိုး ဆီမြွန်နီ။
စဉ်းစား…ဘာလုပ်ရမလဲ…? နွေရာသီ ပြောင်းရွှေ့ ချိန်ကလည်း ပိတ်ဖို့နီနေပြီ။
ဒီအသင်းကလည်း လာလီဂါ ချန်ပီယံဆု ကို ဘာစီလိုနာ နဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် တို့လိုမျိုးပဲ စိန်ခေါ်နိုင်တဲ့ လူအင်အားရှိနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းပါပဲ။
အက်တလက်တီကိုကနေပြောင်းလာတဲ့ ဂိုဒင် နဲ့ ဂရစ်ဇ်မန်တို့ကို အဲ့သည့်အသင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်း တွေ မေးကြည့်ရမယ်။
ဂိုဒင် နဲ့ ဂရစ်ဇ်မန်တို့ပြောတဲ့ အက်တလက်တီကိုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေက အားလုံး အကောင်းတွေချည်းပဲ သူတို့နှစ်ယောက် စလုံးကလဲ အဲ့သည့်ကလပ်မှာ အောင်မြင်မှုတွေ အများကြီး ရယူနိုင်ခဲ့ကြတာကို ကျွန်တော် သိချင်တဲ့ အကြောင်းတွေ ၊ ကျွန်တော့် အတွက် လိုအပ်မယ် ထင်တာတွေ အားလုံးကို သူတို့က ပြောပြပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံအရ ဆုံးဖြတ်ချက် မချခင်မှာ လူတစ်ယောက်နဲ့ နောက်ဆုံး စကားပြောကြည့်ရမယ်။
ကျန်တော့်အပေါ်မှာ သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက် ဘယ်လိုရှိမလဲ…?၊
ကျွန်တော် တွေ့မယ့် သူက နည်းပြ ဆီမြွန်နီ၊ လာလီဂါရဲ့ ဒေါသအိုး။
နည်းပြ ဆီမြွန်နီ နဲ့တွေ့ဆုံးခြင်းကလည်း အရေးပါခဲ့တယ်။
ကျွန်တော် ဆီမြွန်နီနဲ့ စကားပြောဖြစ်ခဲ့ပြီးချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရခဲ့ပြီ အက်တလက်တီကိုကိုပြောင်းတော့မယ်။
သူနဲ့ တွေ့ပြီးချိန်မှာ အပြင်မှာထွက်နေတဲ့ သတင်းတွေလိုတော့ အရမ်းဆိုးတဲ့သူတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ဘူး။
အက်ဒီယာကောင်းတွေ အပြည့်နဲ့ လူတစ်ယောက်ဘဲ စိတ်ဓါတ် ခွန်အားတွေကိုလဲ ပြန်ရလာတယ်။
ကျွန်တော် ဒီကလပ် နဲ့ နောက်ထပ် ဖလားတွေ အများကြီး ဆွတ်ခူးသွားနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမယ် အသင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိဖို့ အတွက်လဲ ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က ဆွာရက်ဇ်။ အထင်သေးတဲ့သူတွေကို သင်ခန်းစာပေးရအုံးမယ်။
အေဂျက် ၊ လီဗာပူး ၊ ဘာစီလိုနာ တို့လို လုံးဝ မတူတဲ့ ကစားဟန်တွေ အောက်မှာ ၊ တစ်သားတည်း ဖြစ်အောင် ကစားပြနိုင်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်က တီကို ရဲ့ ကစားဟန် နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ စိုးရိမ်နေစရာ မလိုပါဘူး။
ကျွန်တော့်အတွက် နောက်ထပ်ခရီးမှတ်တိုင်တစ်ခု စတင်တော့မယ်။